आधी रातअघि – Janaubhar
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर २६, २०६८ | 117 Views ||
अघिल्लो अंकको बाँकी
१०/१२ जना अट्ने गाडी । दुईजनाले बीचमा पारेर बसाए । यति असजिलोरी कि– एकजनाले हनुमान टोपी लगाइदिएर भल्याप्प पारी अनुहार छोपिदियो । त्यसपछि– गाडी गुड्यो, चकमन्न रातमा ।
रातको सन्नाटासँगै चिसो बतास चलिरहेछ । रातको खुला सडकमा गाडीको रफ्तार तेजैजस्तो लाग्यो । मलाई उनीहरुले बीचमा बसालेका छन् । यताउताबाट कुहिनोले हान्न थाले ।
‘भन् काँ छ चौधरी ?’
पटक–पटक एउटै प्रश्न दोहो¥याइरहे । उही उत्तर दोहो¥याइरहेछु, ‘चिनेकै छैन । कसरी भन्नु कहाँ छ भनेर ? मजस्तो अरू नै कोही होला । म होइन ।’
‘साले ! तँ नभए तेरो डेरा जान्थ्यौं, तैलाई नै लिन ?!’
भकुरिरहे, गाडीको रफ्तारसँगै ।
सायद तीनचार मिनेटपछि– पट्टी फे¥यो, हनुमान टोपीको बदलामा । पट्टीको रङ ? थाहा भएन । सास फेर्न असजिलोगरी यति कस्यो कि ! त्यसपछि ? हात बाँधिदियो । डोरीले जस्तो लाग्छ ।
को हो ? क्या हो ? थाहा छैन ।
सम्झन्छु– गाडी गुड्नेबित्तिकै बाख्रा देखेर फुलेको चितुवाको जीउजस्तो जीउ फुल्यो । क्रुर यातनाबीच कति बस्नुपर्ने ? मारेछ भने कसरी मार्ला ? ‘ड्याम्म’ हाने त हुन्थ्यो । तर, कुटीकुटी मा¥यो भने कसरी सहने ? यति उकुसमुकुसिएँ कि । भागूँजस्तो पनि लाग्यो । सडाएर मार्ला …। बरु भाग्दाभाग्दै गोली लागे सन्चै हुन्थ्यो । तर, दायाँबायाँबाट यसरी चेपेका छन् कि ! हलचल गर्नै सक्तिनँ । कुहिनाले छिर्कने र कोपरिरहेछन् । जस्ता कुरा खेल्न थाले ।
गाडीमा कुनै गीत बजेको छैन । सुनसान रातमा गाडी हुँइकिरह्यो । गीत भने पनि जे भनेपनि तिनका कुहिना र बर्जित शब्द मात्र थिए । अचेल बजारमा सुनिने ¥याप गीतजस्ता ।
‘चन्दा कति उठाइस् ?’
एउटा मात्र बोलिरहेछ । अरू मौन छन् ।
कतिजना छन् ? थाहा भएन ।
गाडी गुडिरहेछ ।
लाग्यो परीक्षा हलमा जाँदैछु– जीवनमरणको जटिल प्रश्नका उत्तर लेख्ने परीक्षा हलमा । जुन परीक्षा पाइला–पाइलामा हुन्छ । तर ती मिड टर्म र अर्धवार्षिक हुन् भने यो एसएलसीजस्तै । वार कि पार ।
तर, आफू ? तयारीबिना नै । अझ परीक्षा फाराम नै नभरी जाँच दिन गएजस्तो ।
बस् ! स्वाभीमान र आस्थाको अग्निपरीक्षा !
जटिल प्रश्नलाई हल गर्नु छ ।
शारीरिक र मानसिक यातनाका कापीमा जीवनमरणको प्रश्न झर्नेछन् (जो थालनी भइसकेको छ) । चौबीसै घण्टा हर यक्ष प्रश्नका जवाफ दिन तयार रहनुपर्नेछ ।
कति जटिल जाँच ? (जीवनको हरपाइलामा आइरहलान् यस्ता जाँच । रूप मात्र फरक होला ।
(आफूले टेकेको धरातलप्रति इमान्दार रहन सक्छु या सक्तिनँ ? सायद यै हो जीवन–समरको अग्निपरीक्षा । जो अनन्तसम्म नटुङ्गिने । चुनौती, द्वन्द्व त सधैं हुन्छ नै । चुनौतीलाई अवसरमा कसरी बदल्ने ? प्रश्न यो हो ।
कहाँ जाने ? थाहा छैन । को हुन् यी ? त्यो पनि थाहा छैन । सोधेको पनि छैन । तर, मलाई यकिन भइसक्यो कि यसरी लाने सेनाबाहेक अरु को हुन सक्छ ?
गाडी गुडिरहेछ । मनमा भाँतीभाँतीका शंका उपशंकाका भुमरी उठेका छन् । घरी गाली गर्छ । घरी सोध्छ । घरी कुहिनोले हान्छ । घरी तेल निकाल्ने गरी वरपरबाट पेल्छन् ।
आँखा छोपिएको छ । डोरीले हात बाँधिएको छ । ‘अज्ञात दुश्मनको पञ्जामा अज्ञात गन्तव्यको यात्रा’ यति भयानक हुँदोरहेछ कि ! त्यसबेला मनको समुद्रमा आएको सुनामीलाई शब्दलाई अक्षरमा पोख्न मसँग मौजूद शब्दहरू असक्षम भए । मलाई माफ गर्नु होला ।)
पौने घण्टाजति गुडेपछि (मलाई यस्तै लाग्छ), गाडी रोकियो ।
बिलकुल कोलाहल । चिच्याहट । मानौं पस्दैछु, लोककथाको राक्षसको ओढारभित्र ।
सोध्यो, ‘भन् काँ छ चौधरी ?’
चिनेको चौधरी– विलोचन चौधरी– सहसचिव, घोराही क्याम्पसको (स्ववियूको जो नेवि संघका) हुन् । टियूमा अंग्रेजी पढ्दैछौं । अर्को चिनेको चौधरी– कृष्णराज चौधरी । उनी त काँग्रेसी पनि होइनन् । फेरि ती कहाँ कमरेड चौधरी हुन् र ? कमरेड चौधरी भनेको त पार्टीको टेकनाम पो होला ।
सोध्छ, ‘कमरेड चौधरी ।’
ट्रकबाट सिमेन्टको बोरा भुईंमा खसालेजसरी लात्ताले भुईंमा झा¥यो । आँखामा पट्टी छ । पछिल्तिर हात बाँधिएको छ ।
कस्तो छ भुईं ? कुन्नि । भुईंको रङ थाहा भएन ।
एकदमै चिसो लाग्यो । टेकेको जमीन नै भासिदै गएजस्तो भान भयो । कोलाहल कानमा ठोक्किन थाल्यो । लाग्यो, मजस्त थुप्रै ल्याइएका रहेछौं । हिलोमा चोबल्दै कुटेको आवाज झन टाँठिन थाल्यो । ‘भु…’ भयो भन्छु भन्छु’ भनेका चित्कारले कान नै भम्म भएजस्तो लाग्यो ।
रात कति कालो छ ? थाहा छैन । कस्ता छन् ती चिच्याउने, रुने मान्छे ? थाहा छैन । चौरजस्तो न कस्तो–कस्तो लागिरहेछ । चिसोले पानी नपुगेको पाखे खेतजस्तो पनि लाग्छ । वरपर मान्छे छन् या छैनन् ? थाहा छैन । तर निरन्तर झरिरहेछ चित्कार ।
सोधेको के हो चौधरी ? को हो ? सुन्दै नसुनेको कसलाई भन्नु ? फेरि के सोध्ने होला अरू ? किताबको बारे सोधे त भनम्ला तर अरू ? मनमा तर्कना तलमाथि गर्न थाले– मरुभरु (मृत्यु वा बिहे)मा अघिपछि सुनसान हुने गाउँका बाटोमा तँछाडमछाड गर्दै जाम भएजस्तो ।
‘कहाँ हो यो ? मार्छ कि क्या हो ? के गर्ला अब ?’ द्विविधाबीच उभिने कोशिस गरेँ ।
‘आँखामा पट्टी’ सम्झेर झन उकुसमुकुसिएँ । पछिल्तिर डोरीले हात बाँधिएको छ ।
बर्खामास उर्लेको ठूल्गारखोलाको मेना (खोलामा जहाँनेर सबैभन्दा तीव्र वेगमा पानी बग्छ र बगाउने खतरा हुन्छ) मा पसेजस्तो लाग्यो ।
सम्झेँ –कहिले जरी छिन्न1 कहिले रोपाई गर्न खेत झर्दा बर्खामासको ठूल्गारको बाढी तरेको । चुनवाङमा पानी प¥यो भने थाहै नपाइकन बाढी आउने ठूल्गारको भेल जंघार हेर्दै तथ्र्यौं । वारपार उर्लेको भेल देखेर जब मेरा गोडा काम्न थाल्थे तब बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘घाट पसेपछि तिघ्रा कमाएर हुँदैन ।’
बाबाले भनेको त्यो कुरा टाउकैमा घन ठोकिएजस्तो अनुभूत भयो । झल्यास्स भएँ । हेरेँ– आँखामा पट्टी । केही देखिएन । चारैतिर कालो नै कालो । कोलाहल र चिच्याहट ।
लाग्यो– रनबन बगाउँदै भयानक कोलाहल मच्चाएर ठूल्गारखोलामा ठूलो भल (बाढी) आएको छ । र, मैतालु (माइत जाने), वस्तुभाउ टार्ने ग्वालाहरू र मेलापात गएकाहरू कसरी भेल तर्ने भनेर किनारमा उभिएर चिच्याइरहेछन् । ‘तर्ने कसरी’ भनेका हुन् । तर, बाढीको कोलाहलले केही सुनिदैन ।
ठीक त्यस्तै । वारिपारिका बस्ती, खेतबारी र किसानका पसिना र सपना बगाउँदै उर्लिरहेछ ठूल्गार । र, जंघारै नहेरी उर्लिरहेको मेनामा छु म । देखिदैन जंघार पनि । भेल उर्लेको छ । जसरी नि तर्नु छ । ठाडो खोला यति बलियो छ कि । ढाल्न खोज्दैछ, टेकेको भुईंको बालुवा बगाउँदै । र, तीनपानेले मातेको मान्छेजस्तै ढलपल–ढलपल गरिरहेछु ।
अझ यस्तो भनूँ । सपनामा मात्र देखेको ठूलो सागरमा छु । र, डुब्दै उत्रदै तर्ने कोशिस गरिरहेछु । किनार कतै देखिदैन । पौडनलाई हात यसो गर्छु । पछिल्तिर बाँधिएको छ । भुलुक्क–भुलुक्क आउने भेलको फोहोर पानी पुछ्न यसो हात उठाउन खोज्छु । तर, हात बाँधिएको छ । र, अनुहारमा पट्टी । मातेजसरी धङ्धङिन थाल्छु । अत्यास र छटपटीले मन गाभोजस्तो फटरक्क गल्यो ।
कतै त किनार भेटिएला नि ! किनार, जंघार नभएको खोला र बन्दरगाह कहाँ होला र यो दुनियाँमा ?
यसो पट्टीबाट हेरेँ– चारैतिर अँध्यारो । तर, त्यै अँध्यारोमा देखेजस्तो लाग्यो– भुमरी, मेना, छाल, टेकेको भुईं खोल्दै गएको, अनुहार पनि भेलमा डुब्दै गएको, हिँक्क–हिँक्क गरिरहेको म ।
ढलपल–ढलपल भइरहेको बेला ठिङ्ग उभिने प्रयास गरेँ फेरि सम्झेर, ‘घाट पसेपछि तिघ्रा कमाएर हुँदैन ।’
‘मु..तँ अब छैनस् ।’ लातले या हातले केले हान्यो कुन्नि ? परतिर हिलोमा हिल्लिन पुगेँ । झन चिसो भयो । कोलाहल र चिच्याहटसँगै मध्यरातमा चिसो हावा कानमा ठोकियो जो अभिभावकले सम्झाएजस्तो लाग्यो, always be ready for an unknown challenge.
1ब्याडबाट धानको बिउ उखेल्नु
लेखकको प्रकाशोन्मुख कृति ‘रातको १२ बजे’ बाट
Prevदाङको समग्र क्षेत्रमा ध्यान पुग्न आवश्यक